လာတက် - ဝီကီပီးဒီးယား
ကိုဩဒိနိတ်: 34°10′12″N 77°34′48″E﻿ / ﻿34.17000°N 77.58000°E﻿ / 34.17000; 77.58000ကိုဩဒိနိတ်: 34°10′12″N 77°34′48″E﻿ / ﻿34.17000°N 77.58000°E﻿ / 34.17000; 77.58000
၅၉၁၄၆ စတုရန်းကီလိုမီတာ (၂၂၈၃၆ စတုရန်းမိုင်)
အမြင့်ဆုံး နေရာ (Saltoro Kangri)
၇,၇၄၂ မီတာ (၂၅၄၀၀ ပေ)
အနိမ့်ဆုံး နေရာ (Indus River)
၂၅၅၀ မီတာ (၈၃၇၀ ပေ)
လာတက်သည် အိန္ဒိယနိုင်ငံက အုပ်ချုပ်လျက် ရှိသော ပြည်ထောင်စုနယ်မြေဖြစ်သည်။ ထ်ုဒေသသည် အိန္ဒိယနှင့် ပါကစ္စတန်အကြား ၁၉၄၇ ခုနှစ်ကတည်းက နယ်မြေပိုင်ဆိုင်မှုအငြင်းပွားမှု နှင့် ၁၉၆၂ ခုနှစ်မှ စ၍ တရုတ် တို့အကြား ဖြစ်ပွားခဲ့သော ကက်ရှမီးယားဒေသ၏ အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။   အရှေ့ဘက်တွင်တရုတ်ပိုင် တိဘက်ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသ ၊ တောင်ဘက်တွင် အိန္ဒိယနိုင်ငံ ဟီမာချယ်ပရာဒေ့ရှ် ၊ အနောက်ဘက်တွင် ဂျမ်မူနှင့်ကက်ရှမီးယားပြည်ထောင်စုနယ်မြေ၊ အနောက်မြောက်ဘက်တွင် ပါကစ္စတန်ပိုင် ဂီလ်ဂစ် ဘာတီစတန် အုပ်ချုပ်ရေးနယ်မြေ၊ အနောက်တောင်ဘက်ရှိ Karakoram Pass ကို ဖြတ်၍ တရုတ်နိုင်ငံ ရှင်ကျန်းကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသ တို့နှင့်ဘထိစပ်နေပါသည်။ လာတက်သည် မြောက်ဘက်ရှိ Karakoram တောင်တန်းရှိ Siachen Glacier မှ တောင်ဘက်ရှိ ဟိမဝန္တာတောင်တန်းအထိကျယ်ပြန့်ပါသည်။   အရှေ့မြောက်ဘက်အဆုံးတွင်လူနေထိုင်မှုမရှိသော Aksai Chin လွင်ပြင်များပါ ၀ င်သည်ကို အိန္ဒိယအစိုးရ က Ladakh ၏အစိတ်အပိုင်းဖြစ်သည်ဟုဆိုသော်လည်း ၁၉၆၂ တရုတ် - အိန္ဒိယစစ်ပွဲနောက်ပိုင်းတရုတ်၏ထိန်းချုပ်မှုအောက်တွင်ရှိသည်။   Ladakh ၏အိန္ဒိယအုပ်ချုပ်ခွင့်ရပြည်နယ်တစ်ခုဒေသဖြစ်ခဲ့သည် Jammu နှင့်ကက်ရှမီးယား ဟာလာသောအခါဩဂုတ်လ 2019 အထိ အိန္ဒိယပါလီမန် တစ်ဦးလွန် လုပ်ရပ် Ladakh 31 အောက်တိုဘာလ 2019. အပေါ်သီးခြားပြည်ထောင်စုနယ်မြေဖြစ်လာခဲ့သည်သော 
တိဘက် နှင့် လာတာခီ တို့က လာတက်ကိုာွသဟာွသဟုသ်ဟုဟုဟု ခေါ်ဆိုကြပြီး (သမိုင်းကြောင်းအရ လာဒွ ဟုဘာသာပြန်ခြင်း) သည်“ ကုန်းမြင့်မြေများ” ကိုဆိုလိုသည်။ လာဒက်ခ် သည်တိဗက်ခရိုင်များစွာတွင်အသံထွက်ဖြစ်ပြီးလာ ဒက်ခ် သည် ဟိန္ဒူ နှင့် အူဒူ စာလုံးပေါင်း၏ဘာသာပြောင်းလဲခြင်းဖြစ်သည်။ 
အေဒီ ၅၆၅ တွင်တောင်အာရှ
Kyide Nyimagon ၏အင်ပါယာသူ၏သားသုံးယောက်, c. 930 CE ။ Ladakh / Maryul နှင့် Guge-Purang အကြားနယ်နိမိတ်ကို Gartok မြောက်ဘက်၊ ပါးလွှာသောမျဉ်း ကြောင်း ဖြင့် ပြသည်
ပါကျီဂုံ တည်ထောင်သော အနောက်တိဘက်မင်းဆက် မားယုလ် မင်းဆက်သည်ရာစုနှစ် ငါးခုကြာမြင့်ခဲ့ပြီ းမွန်ဂို / မဂို Mirza Haidar Dughlat ၏အောင်ပွဲများကြောင့် အဆုံးသို့ုားညးသွာသ်ားညးသွာသ်။Maryul“ MaryulMaryulyul” ဟုခေါ်ဝေါ်ခဲ့ကြသည်။ ဖြစ်နိုင်သည်မှာမူရင်းနာ မည်ဖြစ်သည့် Mrasa (Xuangzhang's, Mo-lo-so ) ဖြစ်သော်လည်းတိဘက်ဘာသာဖြင့်နိမ့်နိမ့် (Ngari လွင်ပြင်) ဟုအဓိပ္ပာယ်ကောက်ယူခဲ့သည်။ Maryul သည်အိန္ဒိယနိုင်ငံမှကက်ရှမီးယားနှင့် Zanskar မှတစ်ဆင့်ဗုဒ္ဓဘာသာ၏ဒုတိယပျံ့နှံ့မှုတွင်ပါ ၀ င်ခဲ့ပြီးဤကာလအတွင်းခိုင်မာစွာဗုဒ္ဓဘာသာဝင်ဖြစ်ခဲ့သည်။
Thiksey ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်း မှာကိုးထပ်စကား
Leh ခရိုင် ၊ Likir ဘုန်းကြီးကျောင်း ရှိ Maitreya ၏ရုပ်တု
Thikse ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်း၊ လာတက်။
လေးနန်းတော် ရှိ Dosmoche ပွဲတော်အတွင်း Cham အက
Likir ဘုန်းကြီးကျောင်း, Ladakh
၁၈၇၀ ပြည့်နှစ်များတွင် Hemis ဘုန်းကြီးကျောင်း
J&K နှင့် Ladakh - အိန္ဒိယပြည်ထောင်စုနယ်မြေများ
Leh အနီး အိန္ဒိယနက္ခတ္တဗေဒလေ့လာရေး
Leh အနီးဟိမ ၀ န္တာရှေ့တွင်သစ်ပင်များစိုက်ထားသည်
ရောင်ပြန်ဟပ်မှုနှင့်အတူ Nubra ချိုင့်အမြင်
Zanskar ၏လမ်းကြောင်းတစ်လျှောက်တွင် Om Mani Padme Hum ဟူသော ကမ္ ပည်းစာပါကျောက်ပြားများဖြင့်ထွင်းထားသည်
↑ မော်ကွန်းတင်ပြီးမိတ္တူ။9August 2019 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 8 November 2020 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Ladakh Gets Civil Secretariat (17 October 2019)။
↑ "LG, UT Hqrs, Head of Police to have Sectts at both Leh, Kargil: Mathur"၊ Daily Excelsior၊ 12 November 2019။ 17 December 2019 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ MHA.nic.in။ MHA.nic.in။ 8 December 2008 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 21 June 2012 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Saltoro Kangri, India/Pakistan။
↑ "Part II—Section 3—Sub-section (ii)" (PDF)၊ Gazette of India, Extraordinary၊ Controller of Publications, Delhi-110054၊ p. 2၊ 25 November 2019၊ 30 November 2020 တွင် မူရင်း (PDF) အား မော်ကွန်းတင်ပြီး၊ 8 November 2020 တွင် ပြန်စစ်ပြီး
↑ Jammu and Kashmir, State, India (subscription required) Quote: "Jammu and Kashmir, state of India, located in the northern part of the Indian subcontinent in the vicinity of the Karakoram and westernmost Himalayan mountain ranges. From 1947 to 2019, Ladakh was part of the Indian state of Jammu and Kashmir, which has been the subject of dispute between India, Pakistan, and China since the partition of the subcontinent in 1947."
↑ Encyclopedia of the United Nations and International Agreements: G to M Quote: "Jammu and Kashmir: Territory in northwestern India, subject toadispute between India and Pakistan. It has borders with Pakistan and China."
↑ Jina, Ladakh (1996)
↑ In Depth – Kashmir Flashpoint
↑ "Fantasy frontiers"။
↑ India-China Border Dispute။ GlobalSecurity.org။
↑ "Article 370 revoked Updates: Jammu & Kashmir is nowaUnion Territory, Lok Sabha passes bifurcation bill"။
↑ "Ladakh, the Persian transliteration of the Tibetan La-dvags, is warranted by the pronunciation of the word in several Tibetan districts." Francke(1926) Vol. I, p. 93, notes.
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=လာတက်&oldid=709839" မှ ရယူရန်